Maraykanka Oo Malaayiin Dollar Ku Baayacay Madaxda Al-shabaab | #1Araweelo News Network
Maraykanka Oo Malaayiin Dollar Ku Baayacay Madaxda Al-shabaab
Washington(ANN)Dawladda Maraykanka ayaa malaayiin doollar dul-dhigtay lix ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda Al-shabaab ee ka dagaallama dalka Soomaaliya, iyadoo abaalmarintan la siin doono cid kasta oo keenta warbixino iyo xogo ku saabsan noloshooda.
Waaxda abaal-marinta ee Mareykanka, ayaa 6 milyan oo doollar dul-dhigtay xogaha xubno uu ka mid yahay Amiirka Al-shabaab Sheekh Axmed Diiriye (Abu Cubeyda), kaasoo xilka loo doortay bishii September ee sannadkii hore, kaddib markii la dilay hoggaamiyihii ka horreeyey Axmed Cabdi Godane.
Sidoo kale, waxa min shan milyan oo doollar xogahooda lagu raadinayaa saddex xubnood oo kala ah; Mahad Karatey, Macallin Daa’uud iyo Xasan Afgooye oo ka tirsan madaxda sare ee Al-shabaab.
Saddexdan xubnood ayaa lagu eedeeyey ka qayb-qaadashada shirqoollo dil iyo weerarro ka dhan ah masuuliyiinta dawladda Soomaaliya, askareynta dhalinyarada iyo beegsiga danaha reer galbeedku ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya.
Sidoo kale, waxa min 3 milyan oo doollar la dul-dhigay Macallin Salmaan iyo Axmed Iimaam Cali, siiba Salmaan oo Mareykanku ku eedeeyay inuu madax u yahay dagaalyahannada Al-shabaab ee ka soo jeeda dalalka Afrika.
Axmed Iimaam Cali ayaa isagana lagu eedeeyay inuu Al-Shabaab u qaabilsan yahay askareynta dhalinyarada Keenyaanka ah, isla markaana lacago u soo ururiyo kooxdaas.
Ugu dambeyn, dawladda Mareykanka ayaa Al-shabaab u aqoonsaday urur argagixiso sannadkii 2008, waxana la fadhiisiyey dhaqaalaha madaxda, iyadoo hore lacago malaayiin doollar ah dul-dhigay hoggaamiyeyaal dhawr ah oo uu ku jiray Axmed Godane oo lagu dilay weerar duqayn diyaaradaha dagaalka ee Maraykanku la beegsadeen September 2014.